बल्ल बाहिरियो सबिता भण्डारी मृत्यु प्रकरणको ड रला ग्दो रहस्य, अर्को भिडियो पनि भेटियो हेर्नुस एक एक वास्तविकता बाहिरिदै – Classic Khabar
June 11, 2021 214
यो पनि पढ्नुहोस्,सिमानाकामा नेपालीहरु भारतिय छीमेकीको भरमा बस्दै – कचनकवल गाउँपालिका–४ दले गाउँका नासिफ मियाँलाई नेपालीभन्दा भारतीय छिमेक नजिक पर्छ। मियाँको घरको छानाको पानी भारतीय छिमेकीको आँगनमा खस्छ। त्यसैले सीमा विवाद भइरहँदा पनि उनी छिमेक सम्बन्ध नबिगारी बसेका छन्। नेपालमा लक डाउन, नाका बन्दी हुँदा तिनै छिमेकीले रासन दिएर बचाउँछन्। अनि ती छिमेकीसँग उनी किन बाँझ्छन् र ?
निषे धाज्ञामा पसल खुल्दैनन्। यस्तोे अवस्थामा भारतका छिमेकीले लुकिछिपी रासन ल्याएर नेपालीलाई नबेच्ने हो भने उनीहरूको छाक कसरी टथ्र्यो र ? मियाँले गत सालको कोरोनाको लहर सम्झिए। नेपालमा गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण गरिबले खान नपाएको उनले पनि सुने। तर, सरकारले सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई खाद्यान्न छ–छैन भनेर सोधखोज गरेन।
सीमामा जोडिएरै बसेका ३४ घरका नेपाली आर्थिक रूपले सम्पन्न छैनन्। उनीहरूसँग जग्गाजमिन थोरै छ। भरपर्दो जागिर कमैको मात्र छ। तर, आफ्नै सरकारले वास्तै नगरेको गुनासो उनीहरूको छ। भारतीय छिमेकीकै कारण उनीहरूलाई खाद्यान्न अभाव कहिल्यै पनि भएन। म र्दाको म लामी र जिउँदाको जन्ती भएर बसेका सीमा क्षेत्रका दुवै देशका बासिन्दाबीच प्रगाढ सम्बन्ध छ।
पश्चिममा झैं चरम सीमा विवाद पूर्वमा नपरे पनि भावनात्मक असर भने बेलाबखत पर्ने गरेको स्थानीय सुनाउँछन्। झापाको पूर्वी सीमा क्षेत्र इलामबाट गौरीगन्जसम्मका नेपाली अधिकांश भारतीय बजारमा निर्भर छन्। उनीहरूलाई हरेक कुरा नेपालभन्दा भारतसँग सरोकार हुन्छ। छोरीचेलीको बिहेवारी चल्छ। तरकारी ऐचोपैंचो चल्छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
Prevदाइजोमा सिलिण्डर र चुल्हो नदिएको भन्दै महोत्तरीमा नवदुलही माथि भयो यस्तो घटना